Caleemo-saarka Madaxda Galmudug oo dib loo dhigey sabab laxiriirta cudurka coronavirus, – Radio Baidoa
Caleemo-saarka Madaxda Galmudug oo dib loo dhigey sabab laxiriirta cudurka coronavirus,
By Webmaster	 On Mar 18, 2020
Guddiga Qaban qaabada Munaasabadda Caleemasaarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo ku Xigeenkiisa ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigey Munaasabadda sababo la xiriira xaalada dalka kusoo korortay ee Cudurka Cornavirus.
Munaasabadda Caleem-saarka ayaa Guddiga waxaa ay horey u iclaamiyeen in la qabto 26-ka Bishaan,hayeeshee dib loo dhigey sida uu sheegay Guddoomiyaha Guddiga Siyaasiga Yuusuf Garaad Cumar.
“Guddiga Qaban qaabada caleemasaarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo ku Xigeenkiisu ka dib markii uu qiimeeyay xaaladda uu dalku galay, dulinka Korona oo soo gaaray awgiis, wadatashina la sameeyay Madaxtooyada Galmudug, wuxuu go’aansaday in dib loo dhigo munaasabadda Caleema saarka oo dhici lahayd 26-ka Maarso 2020 ayuu yiri”Yuusuf Garaad.
Sidoo kale Yuusuf Garaad ayaa cadeeyey sababaha ugu weyn ay dib u dhigista Xafladda,waxaana uu sheegay in ay qeyb ka tahay joojinta dowladda ee duulimaadyadda Caalamiga ah maadaama Munaasadda la filayo inay ka qeyb galaan wufuud Caalami ah iyo mart sharaf kale.
“Guddigu wuxuu garawsaday baahida loo qabo in maskax, muruq iyo maalba la isugu geeyo ka hortagga faafidda dulinka Korona iyo daryeelka dadka qaada cudurka ka dhasha ee Covid-19. Caleema saarka waxaa la qaban doonaa xilli ku habboon kaas oo uu Guddigu la wadaagi doono Dadweynaha xilli gudboon ayuu yiri”Guddoomiyaha.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada in muddo gaaban gudaheed faahfaahin rasmi ah ka bixin doontaa howlaha ay Madaxtooyada iyo Baarlamaanku ku dhaqaaqi doonaan maalmaha iyo toddobaadyada foodda nagu soo haya.
Wasiirka Dastuurka ee xfs oo xafiiskiisa ku Qaabiley Ergayga Gaarka ah ee QM Amb James Swan,
Dowladda Mareykanka oo lacag u direysa shacabka
DHAGEYSO,,Shacabka magaalada beydhabo oo lagu Amrey in guri kasta hortiisa ay ku…
Taliye Xijaar oo Kormeer kawada magaalada Dhuusamreeb.
Faah faahino kasoo baxaya Dil kadhacay Kismaayo.